Nkọwa: Jiri ọgụgụ isi Zigharịa ọdịnaya saịtị gị kachasị mma na Social Media | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa bụ ihe okike ma m kwenyere na oge ụfọdụ ọ na-emebi ọrụ ha. Ọ bụ ihe m na-anọgide na-echetara onwe m na isiokwu m. Mgbe mgbe m na-amaba n’ime miri banye n’ime ngwa ọrụ na atụmatụ ... echefukwala na enwere ndị ọbịa na esoghị m njem a.
Maka ụlọ ọrụ, nke a bụ nnukwu nlekọta. Ka ha na-aga n’ihu idepụta ma tinye ọdịnaya, ha na-echefu na enwere ụfọdụ ndị nwere ike ghara ịma maka ikpo okwu ha ma ọ bụ nnukwu ọdịnaya ha nwere ike bipụtara n’ọnwa gara aga, afọ gara aga, ma ọ bụ karịa nke na-enye ozi ha chọrọ.
Nke a bụ isi ihe mere anyị ji asọ ndị ahịa anyị iji (na anyị zụlite) a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya na saịtị ha. Usoro ọbá akwụkwọ ọdịnaya na-eme ka o doo anya na ndị otu ahia gị na-elekwasị anya na isiokwu, ụlọ ọrụ, ọkwa, na onye ọ bụla ọbịa na-abịa na saịtị gị. Ọrụ gị abụghị imepụta iyi na-enweghị ngwụcha nke ọdịnaya ọhụụ… ọ bụ iji hụ na ị nwere ọba akwụkwọ zuru oke nke emegoro ma melite oge.
Ighaghachi na Social Media
Nlekọta ọzọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta. Ighaghachi na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike mgbe ụfọdụ iyi spammy… mana ọ dị mkpa n'ihi na onye na - eso ụzọ ị nwetara n'ọnwa gara aga anaghị agụ ma na ịpị site na mmelite mgbasa ozi gị maka afọ gara aga ma ọ bụ karịa. Ikwesiri ịgwọ ọdịnaya nke mgbasa ozi mmekọrịta gị dịka iyi egwu na-akwado library na-akwalite ọbá akwụkwọ gị na ndị na-eso ụzọ n'akụkụ ọ bụla na njem ha (ọ bụghị nke gị).
Otú ọ dị, ọ bụghị nke ahụ dị mfe. Ọ bụrụ n ’ị na - ewu kwụ n’ahịrị ma na - ebugote mmelite mmekọrịta ka ị pịa ndị na - ege gị ntị ugboro ugboro… ọ nwere ike ibute ike ọgwụgwụ nke mmadụ. Ike ọgwụgwụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike imebi ọtụtụ ụdị ika gị site na ị gbahapụ onye ọ bụla ma mee ka ndị na-eso ụzọ hapụ gị n'ihi na ha ahụghị uru ọ bụla ị na-eme. Ntughari nke ọgụgụ isi bụ isi - na-eme ka ha bụrụ oge mana ha anaghị adịkarị… na-agwakọta ọdịnaya ọhụrụ ma na-enye ume ọhụrụ ochie iji mee ka itinye aka.
Elokenz Smart Content Nkesa
Elokenz bụ ọgụgụ isi, nkwụghachi ụgwọ akpaaka nke na-enyocha ọdịnaya gị, na-amụta ihe ọdịnaya kachasị mma ịkekọrịta dabere na omume ndị na-ege gị ntị, ma kpebie ụdị ọdịnaya ị ga-eso na-esote na ntanetị mgbasa ozi ọ bụla.
Elokenz na usoro 4 dị mfe:
Bubata otu ọdịnaya - ebubata ọdịnaya gị na Elokenz ma gosipụta ya n'ọbá akwụkwọ nke ngwa ọrụ ahụ.
Họrọ akaụntụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya - họrọ nyiwe ederede gị ga-ezigharị na ya. Elokenz na-ahụ maka ịkwalite ọdịnaya gị.
Mepụta mmelite ọkwa dị iche iche - Elokenz -enyere gị aka ike dị ka ọtụtụ ọdịiche dị ka ịchọrọ kwa ikpo okwu. Ngwá ọrụ ahụ ga-ahọrọ ụdị dị iche iche oge ọ bụla edegharịrị isiokwu gị.
Nyochaa iru iru gị ma melite ọdịnaya gị - ikpo okwu na-enye ndị na-ere ahịa ikike ịhụ ụdị ọdịnaya yana mmelite emelitere nke ọma iji dọta ndị ọbịa ọhụụ na ịkwanyekwu ụzọ.
Enwere m mmasị iji ngwá ọrụ a - ọ dị mfe ịtọ oge mmekọrịta na Elokenz ọbá akwụkwọ RSS nke m wuru. Enwere m mmasị na nchịkọta ha ka m nwee ike ịhụ ihe na-arụ ọrụ na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla. Can nwere ike idezi ọ bụla nke gị mbak ngwa ngwa!
Lisa Sicard, Na-akpali Ka Mma
Elokenz enyere gị aka ịchekwa oge na ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta kwa ụbọchị ma rute ọtụtụ ndị ahịa site na iji ọdịnaya gị zuru oke. Ghara ikwu na ị na-aga ịbawanye nloghachi na itinye ego na isiokwu ọ bụla ga-ebugharị okporo ụzọ ma na-eduga!
Bido Oge Ọnwụnwa Elokenz
Ngosipụta: Abụ m mmekọ ma ọ bụ Elokenz.
Tags: oge kacha mma iji biputerenkesa ọdịnayaỌbá akwụkwọ ọdịnayaelokenzFacebookLinkedInrepostnhazi ogeusoro ihe omumeịhazi usoro mgbasa ozi mmekọrịtaike ọgwụgwụ nke mmadụelekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ media kwụ n'ahịrịelekọta mmadụ postTwitter